muscab xasan, Author at Hoyga Wararka
by muscab xasan June 26, 2019
Maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ayaa shaacisay xilliga ay dib u billaabeyso dhageysiga kiiska Soomaaliya ay u gudbisay ee ka dhanka ah Kenya. Dacwaddan la xiriirta muranka dhanka xuduudda badda…
Gabadh 23 jir ah oo hadda ka hor ku guuleysatay tartanka qurux Gambia ayaa sheegtay in sannadkii 2015-kii uu kufsaday madaxweynihii hore ee dalkaas Yaxye Jaamac. Fatu Jallow ayaa hay’adda…
Ra’isulwasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa kasoo muuqday baroordiiq loo sameeyay jeneraalkii lagu diley afgembigii dhicisoobay ee dalkaas ka dhacay, waxaana la arkayay ra;isulwasaaraha oo aad u barooranaya. Jeneraal Seare Mekonnen…
by muscab xasan June 25, 2019
Xoghayaha arrimaha dibedda Mareykanka, Mike Pompeo ayaa maanta gaaray dalka Sacuudiga, halkaas oo uu ku yeelan doono wada-hadallo iskaashi oo ka dhan ah Iran. Pompeo ayaa la filayaa inuu magaalada…
Guusha xisbiga mucaaradka ee doorashada duqa Istanbul ee dalka Turkiga ayaa si rasmi ah loo shaaciyay Isniintii, iyadoo falan qeyayayaal ay sheegayaan in taasi ay muujineyso in dalka ay ka…
aanta oo Talaado ah ayaa lagu wadaa in maxkamad ku taalla magaalada Hargeysa uu markii Labaad kasoo muuqdo wariye C/maalik Muuse Coldoon. Coldoon oo ah Wariye ayaa sidoo kale ah…
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa qaadacday shir maanta lagu waday iney ku wada hadlaan Somaliland oo qorshuhu ahaa inuu ka dhaco magaalada Nairobi. Agaasimaha guud ee Villa Somaliland Dr. Nuur Diiriye…
Maxaad ka taqaanaa xayawaanada qeybta ka ah koobka Afrika ee AFCON?
Koobka kubbadda cagta Afrika ayaa ka soconaya dalka Masar, waxaana ka qeybgalaya 24 dal, dhammaantoodna waxa ay leeyihiin astaamo kala duwan oo durba lagu kala garan karo iyo magacyo naanays…
aryaqaan ku sugan dalka Suudaan ayaa BBC-da u sheegay in kaligiis dowladda usoo fasaxday qadka internet-ka oo intii muddo ah jarnaa. Cabdicadiim Xasan ayaa ku guuleystay dacwad uu geeyay maxkamadda…
Madaxweyne Trump ayaa qalinka ku duugay cuanqabateyn cusub uu ku soo rogay dalka Iran, cunaqabateynka oo saameyn u geysanaya hoggaamiyaha ruuxiga Iiraan Ayatollah Ali Khamenei. Mr Trump wuxuu sheegay inuu cunaqabateynkan…